Ma baraf casaan ah | Saadaasha Shabakadda
Markuu qof kastaa ka hadlo barafka ayay malaynayaan oo buste cad oo xiise leh oo daboolaya beero iyo buuro ayaa maskaxda ku soo dhacaya, si kastaba ha noqotee waxaa jira dhacdo sii kordheysa oo barafku isu beddelo gebi ahaanba casaan.
In kasta oo barafka noocan ahi u muuqan karo mid cajiib ah marka laga eego dhinaca aragtida, Abuuritaankeeda waxaa sabab u ah xumaan iyo wax run ah oo aan hoosta kaaga sheego.
Barafka casaanka ah wuxuu leeyahay sharraxaad cilmiyeed waana tan oo kale astaamo caan ah oo aad u soo jiita dadka arka, Waxay u sabab tahay jiritaanka microalgae kaasoo gaari kara malaayiin nuqul santimitir kasta oo baraf ah.
Midabka casaanka leh ee cajiibka ah waxaa u sabab ah nabarrada keena dhalashada ubaxyo waaweyn oo cufan oo loo yaqaan "ubax". Nooca noocan ah wuxuu ku dhici karaa aag kasta oo meeraha ka mid ah inta xaaladaha cimiladu sax yihiin. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaybo adduunka ka mid ah oo u nugul barafka waxa loogu yeero, sida Greenland, Norway, Iceland ama Sweden. Microalgae wuxuu sababa barafka inuu ku dhalaalo si ka dhakhso badan kan caadiga ah tanina waxay ku keentaa ubax weyn guud ahaan dusha barafka. Dhibaatada tan ayaa ah in barafkan aan caadiga ahayn uu dhalaalayo kululaynta adduunka ee laga baqo.
Khubarada mowduucani waxay u maleynayaan in waxa loogu yeero barafka casaanka uu noqon doono dhacdo caan ah oo sii kordheysa sanadaha soo socda, inta badanna waxaa sabab u ah isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka ee meeraha oo dhami ku dhacayaan. Taasi waa sababta barafka casaanka loo tixgeliyo labadaba dhacdo qurux badan, iyo sidoo kale xumaan iyo dhibaato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay baraf casaan ah
Noocyada kaymaha Spain